घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू टम डेभिस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो टम डेभिस बायोग्राफीले तपाईंलाई उसको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी, कारहरू, नेट वर्थ, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो अंग्रेजी पेशेवर फुटबलरको जीवनकाल हो, उहाँ बाल्यकालदेखि, जबसम्म उहाँ प्रसिद्ध हुनुभयो। तपाईको आत्मकथा भूख मिल्नको लागि, यहाँ उनको बाल्यावस्था वयस्क ग्यालेरी हो - टम डेभिसको बायोको एक सारांश।
टम डेभिस बाल्यकाल कहानी - उनको प्रारम्भिक जीवन र उदय हेर्नुहोस्।
हो, सबैलाई थाहा छ डेभिस अंग्रेजी फुटबलको एक कूल सेन्ट्रल मिडफील्डर्स मध्ये एक हो। जबकि, केवल केहि थोरैले टॉम डेभिसको जीवनीको हाम्रो संस्करणलाई विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
टम डेभिस बाल्यकाल कहानी:
टम डेभिस बाल्यकाल कहानी - उनको बाल्यकाल फोटो को एक स्पष्ट दृश्य हेर्नुहोस्।
सुरू गर्दै, उनको पूरा नाम हो टम "थॉमस" डेभिस। टमको जन्म जून १ 30 1998 of को day० दिनमा उनको आमा डेन डेभिस (एक कपाल) र बुबा टोनी डेभिस (एक नागरिक कर्मचारी) मा लिभरपूल शहरमा भएको थियो।
होमग्राउन तारा आफ्ना ठूला भाई लिआमसँगै हुर्किए र उनीहरूका आमाबुबाले वेस्ट डर्बीमा हुर्काए। यदि तपाईंलाई थाहा थिएन?… वेस्ट डर्बी लिभरपुल, इ England्ग्ल्यान्डको पूर्वमा एक सम्पन्न उपनगर हो।
टम डेभिसको परिवार पृष्ठभूमि:
टम डेभिसको परिवार लिभरपूल जातीय समूहको हो जो अंग्रेजी भाषा बोल्छन्। मर्सीसाइडको जन्म सेन्ट्रल मिडफिल्डरको परिवारको उत्पत्ति उत्तर पश्चिमी इ England्ग्ल्यान्डको प्रसिद्ध ब्रिटेनको समुद्री शहर लिभरपूलबाट भएको हो। यो एउटा शहर हो जुन युरोपमा संग्रहालयहरूको सबैभन्दा प्रभावकारी संग्रह हो। साथै, यो विश्वको पहिलो यात्री रेलवे लाइनको स्वामित्वमा पहिलो थियो।
टम डेभिस एक मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्केका थिए, उनका परिवारका अधिकांश सदस्यहरू पश्चिम डर्बीको लिभरपुल उपनगर छेउछाउमा बसिरहेका थिए। एउटा केश पाएको जसले कपालका केश सैलुन चलाउँथ्यो र एक बुवा एक मध्यम-वर्ग कमाई गर्नुहुने बुबाले टम डेभिसका दुवै आमाबाबु सहज थिए भन्ने स .्केत दिन्छ।
टम डेभिस फुटबल र शिक्षाको साथ प्रारम्भिक जीवन:
सानो छँदा, टम डेभिसका आमाबुवाहरूले उनलाई स्थानीय मर्सीसाइड स्कूलमा भर्ना गरे, जसले उनीहरूका विद्यार्थीहरूलाई प्रतिस्पर्धी स्कूल फुटबलमा भाग लिन प्रोत्साहित गर्‍यो। यस अनुसार टेलिग्राफ, सानो टम (तल चित्रमा) एक उज्जवल विद्यार्थी थियो, जो विशेष गरी गणित र विज्ञानमा निकै राम्रो थियो।
सानो थॉमस स्कूलमा फुटबल खेल्थे, त्यस्तो समयमा जब लिभरपूल स्कूलहरूमा क्लब एकेडेमीहरूले उनीहरूको सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थीहरू लिने सवालहरू खडा गर्थे।
त्यसबेला, टम डेभिसका अभिभावकहरूको धारणा थियो कि उनका छोराले फुटबलको लागि उसको शिक्षामा सम्झौता गर्नु हुँदैन। डाइन र टोनी दुबै सानो टम विश्वविद्यालय स्तरमा पुग्न चाहन्थे। दुर्भाग्यवश, चीजहरू गएनन् किनकि उनीहरूले भाग्यको लागि धन्यवाद-आशा गरे।
प्रभाव टम डेभिस काका उहाँ मा थियो:
जब शिक्षाको ठूलो महत्त्व राखिएको थियो, टमको फुटबलको लागि प्रेम एक मानिसबाट प्रेरणाको लागि धन्यवाद थियो। यो बाहेक अरू केही छैन "उसको काका- Alan"। तपाईंलाई थाँहा थियो?… टम डेभिसको परिवारमा आफ्नो प्रख्यात काका मार्फत फुटबल जीन पनि चल्दछन्, एलन ह्विटल एलन (तल चित्र) जसलाई टम अनुहारको जस्तो देखिन्छ सन्‌ १ 1970 s० को दशकमा एभर्टन र क्रिस्टल प्यालेसको लागि खेल्नुभयो।
टोम डेभिस अंकललाई भेट्नुहोस्, एलन ह्विटल - तपाईको दृश्यको बारेमा तपाई के सोच्नुहुन्छ? क्रेडिट: ट्विटर
एलन ह्विटलले सानो टम डेभिसलाई मर्सीसाइड स्कूलवाइ फुटबलमा गणना गर्न एक बल बन्न मद्दत गर्‍यो। स्कूलबाट टाढा, डेभिसले आफ्नो भाग्य आफ्नो हातमा लिए किनकि उनी प्राय: वेस्ट डर्बीको स्थानीय फुटबल मैदानमा आफ्नो सीप बनाउँथे।
टम डेभिस प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
डेभिसको फुटबल प्रतिभा फुटबल एकेडेमीहरू र मर्सीसाइड स्कूल फुटबल प्रणाली बीचको विवादको अवधिमा देखा पर्‍यो। त्यो समयमा, Merseyside स्कूल प्रणाली फुटबल एकेडेमीहरूमा भाग लिन आफ्नो उभरती प्रतिभा निरुत्साहित। यो आयो किनकि उनीहरू प्रायः दुबै छेउमा बस्छन् र एक्लो महसुस गर्थे।
लिटिल डेभिस प्रभावित भएको थियो किनकि उसले एकेडेमीमा प्रवेश गर्ने आशा गरेको थियो र उही समयमा स्कूल फुटबलमा भाग लिने थिए। उसको लागि एक मात्र विकल्प थियो, कि त यो एकेडेमीमा सम्मिलित भयो वा स्कूलको फुटबल जारी राख्यो। अन्त्यमा, टोम डेभिसका अभिभावकले उनलाई लिभरपूलमा रहेको ट्रान्मेरे रोभर्स एकेडेमीमा भर्ना हुन स्कूल फुटबलको विकल्प छनौट गरे।
टम डेभिसको जीवनी- प्रख्यात कथाको लागि उनको मार्ग:
बच्चाको बाँच्नको लागि फुटबल खेल्ने इच्छालाई बुझ्दै, टम डेभिसका परिवारका सदस्यहरू विशेष गरी उनका काकाले उनको चाहनालाई समर्थन गर्न उनीहरूले सकेजति गरे। Tranmere रोवर्स मा हुँदा, सानो टम एक मा विकसित भयो आक्रामक whiz बच्चा। उनको खेलको शैलीले लिभरपूलका दुई प्रमुख अंग्रेजी क्लब मध्ये एक, एभरटन फुटबल एकेडेमीलाई आकर्षित गर्‍यो।
२०० In मा ११ बर्षको उमेरमा, टोमले क्लबको साथ सफल परीक्षण पछि टोफीको एकेडेमी रोस्टरमा आफ्नो नाम सुरक्षित गरिसकेका थिए। तल चित्रित, यो उनी आफै र आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको लागि खुशीको शुद्ध क्षण थियो।
२०० happy मा जवान र खुशी टम - जुन वर्ष उनी एभर्टनमा सामिल भए। क्रेडिट: FPCP - Blogspot
सत्य हो, टीयहाँ एभर्टन एकेडेमीमा कुनै रातको सफलता थिएन। डेभिस आफ्नो परिपक्वता र नेतृत्व विशेषता उहाँसित अत्यधिक इष्ट थियो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उसको चरित्र र खेलको शैलीले उनलाई २०१ 16 मा इ England्ल्यान्ड यू १ national राष्ट्रिय टोलीमा बोलाएको पनि देख्यो। आशा गरे अनुसार डेभिसले राष्ट्रिय स्तरमा वृद्धि गरिरहे र प्रक्रियामा इ England्ल्यान्डका युवा कप्तान बने।
टम डेभिसको जीवनी- उनको ख्याति कथा उठेको:
डेभिसले इ England्ल्यान्डका युवालाई कप्तान बनाएको क्षणदेखि उसको प्रगति स्थिर भएको थियो र उनी रोबर्टो मार्टिनेजको नेतृत्वमा टुक्रिने आशा राखेका थिए। डेभिड मोयेस। २०१––१ season सत्रमा, उनी एभर्टनको अन्डर २१ बर्षमा बढुवा भए।
सिजनको अन्त्यमा, उनले आफ्नो पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, काका, अभिभावक र परिवारका सदस्यहरूको लागि खुशीको क्षण। टम डेभिसले एभर्टनको यु २१ टीमको प्रभावशाली फारमले उनलाई म्यानेजर रोबर्टो मार्टिनेजले प्रिमियर लिग डेब्यूको साथ पुरस्कृत गरे।
दिउँसो किशोर, उनको सडकको ज्ञान र स्कूलब्याइ फुटबलको कुनै न कुनै किनारको कारण कुनै समयमै स्थापित भयो। टोम डेभिस बायोग्राफीमा आइतवार १ January जनवरी जनवरी २०१aएक महत्त्वपूर्ण अंश मिति रहन्छ जुन उसले कहिल्यै बिर्सदैन। यो त्यो दिन थियो जब उनले म्यानचेस्टर सिटी बिरूद्ध एभर्टनको लागि पहिलो व्यावसायिक गोल गरेर आफ्नो बाल्यकालको सपना पूरा गरे।
तल चित्रित, डेभिसले ओभरशिंगमा नाजुक रूपमा बल चिप गरिसके पछि ठूलो रचना देखाए Claudio Bravo आफ्नो पहिलो-पहिलो वरिष्ठ गोल निशान गर्न। त्यो महिनाको उनको प्रदर्शनले उनलाई जनवरी पीएफए ​​फ्यानको महिनाको युवा खेलाडी र युवा प्लेयर अफ द सीजन अवार्ड दियो।
त्यो अविस्मरणीय क्षणको दृश्य थोमाले सीनियर खेलाडीको रूपमा पहिलो गोल गरे। क्रेडिट: TheTimes र दैनिक मेल
टम डेभिस बायोग्राफी लेख्न को लागी छिटो अगाडि, हामी निर्धक्क भई भन्न सक्छौं कि उसको जीवन परिवर्तन भएको छ। ऊ पक्कै पनि औसत फुटबलर होईन र उसले मागको युवा हुन सकेको छ। टम आफ्नो प्रिय क्लब (एभर्टन) को प्रतिनिधित्व गर्न गएका छन् उसको २१ औ जन्मदिन अघि before 74 पटक।
निस्सन्देह, हामी फुटबल प्रशंसकहरू अर्को मिडफिल्ड मास्ट्रोले हाम्रो आँखाको अगाडि विश्व-स्तरीय प्रतिभामा आफ्नो बाटो फुलिरहेको देख्न सक्ने अवस्थामा छौं। टम डेभिस वास्तवमै इ England्ल्यान्डबाट बाहिर आउने मिडफिल्डर्सको अन्तहीन उत्पादन लाइनमध्ये एक हो। बाँकी, हामी भन्छौं, अब ईतिहास हो.
टम डेभिस को हो केटी
उनको ख्याति र स्टाइलिश व्यक्तित्वको उदारताको साथ, यो निश्चित छ कि एभर्टन र इ England्ग्ल्यान्डका केहि प्रशंसकहरूले टम डेभिसको प्रेमिका को हुन सक्छ भनेर चिन्ता गरेको हुनुपर्छ। वा उहाँ विवाहित हुनुहुन्छ, एक श्रीमती र बच्चाहरू संग। सत्य यो हो कि त्यहाँ कुनै पनि तथ्यलाई इन्कार गर्ने छैन जुन टमको अत्यन्त प्यारो देखिन्छ कि त्यसले उसलाई एक बनाउँदैन A-Lister सम्भावित प्रेमिका र पत्नी सामग्रीहरूको लागि। जस्तो फिलिप Coutinho.
एभर्टन र इ England्ल्यान्ड फ्यानहरूले सोधेका छन्- टम डेभिस डेटि Who को हो? के उसको प्रेमिका छ? वा श्रीमती? क्रेडिट: आईजी
इन्टरनेट मा धेरै खोज पछि, हामी यो अनुभूति आएका छौं कि टम डेभिस एक्लो हुन सक्छ (लेखेको समयमा जस्तै).
टम डेभिस व्यक्तिगत जीवन:
टम डेभिस व्यक्तिगत जीवन जान्ने। क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
डेविड बेखम, थियरिरी हेनरी, andrea Pirlo सबैसँग वास्तविक मोजो छ जबकि अन्य फुटबलरहरू कुनै प्रकारले गर्दैनन् (कुनै अपराध छैन डैनी पिटर वाटर!)। टम डेभिस एक मान्छे हो जसले संसारलाई प्रमाणित गर्छ- तपाईं सुपर कूल हुन एक ठूलो सुपरस्टार हुन जरूरी छैन.
उसको स्केटबोर्ड, लामो कपाल, पुरानो लुगा, अनौंठो लुकको साथ पनि, पिचमा टमको व्यक्तित्व अझै पनि कायम छ। टम डेभिस फुटबलरको अफ-पिच लुक र नेता बन्ने तिनीहरूको क्षमताको बारेमा समाजको अत्यधिक सामान्यीकरण (स्टिरियोटाइप) को एक प्रतिरोधक औषधि हो। उसको अनौंठो दृश्यको साथ पनि, हाम्रो आफ्नै टम, धेरै अवसरहरूमा पिचमा एक नेता बने। तपाईंलाई थाँहा थियो?… टम डेभिस कप्तान, दुबै इ England्ल्यान्डका युवा र एभर्टन वरिष्ठ टोली।
अन्तमा, टम डेभिसको व्यक्तिगत जीवनमा, केन्द्रीय मिडफिल्डर एक त्यस्तो मानिस हो जो आफ्नै शैलीमा धेरै सहज महसुस गर्दछ। ऊ अरू मानिसबाट प्रभावित हुन मन पराउँदैन। टम विश्वास गर्दछ कि ऊ केवल केहि व्यक्तिहरु लाई पछ्याउनुको सट्टा उसले राम्रो काम गर्नु पर्छ (उदाहरण; जो उनीहरु लामो स्टक लगाउन र कपाल काट्न चाहान्छन्) उसलाई गर्न चाहन्छ
टम डेभिस जीवन शैली:
टोम डेभिस जीवनशैलीको थालनीबाट जान्ने। क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
टम डेभिसको जीवनशैली चिन्नुले तपाईंलाई उसको जीवनस्तरको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। सुरू गरेर, तपाईं हामीसँग सहमत हुनुहुन्छ कि उहाँ हुनुहुन्छ tऊ कहिल्यै फुटबलर शल्ट-वाइड - विश्वमा उत्कृष्ट छ। लेख्ने समयमा जस्तो, डेभिस एक विलासी जीवनशैलीको जीवन बिताउँदैनन् फ्ल्याश कारहरू, ठूला घरहरू (हवेलीहरू) इत्यादि द्वारा सजिलैसँग सजिलैसँग देख्न सक्ने।
माथि देखाईएको छ, टमको उसको नेट मूल्य र बजार मूल्यको बावजुद अझै पनि आफ्नो कारको रूपमा एक अनुकूलित साइकल चलाउन रुचाउँछन्। यो उनको नम्र जीवनशैली को संकेत हो। टमले तथ्यलाई लुकाउँदैनन् कि उनले एफसी बार्सिलोनालाई एभर्टन खेलाडीको रूपमा समर्थन गर्दछ। उसलाई प्लेस्टेशन कन्सोल मनपर्‍यो, जुन उनीसँग खेल्छन् डोमिनिक क्यालोभ-लेभिन (उसको मिल्ने साथी)
टम डेभिस पारिवारिक जीवन:
लिभरपूलका सबैजनाले यसलाई मन पराउँछन् जब शहरका कसैले राम्रो गर्छ, त्यसैले यो केवल टम डेभिसको परिवार मात्र होईन जुन आफ्ना उपलब्धिहरूमा गर्व गर्दछ। लिभरपुल शहरका मानिसहरू भावनात्मक हुन्छन् जब उनीहरूले आफ्नै राम्रो गरिरहेको देख्छन्। भर्खरका उदाहरणहरू हुन्; जोन लुन्डस्ट्रम र क्रिस वाइल्डर जो अंग्रेजी फुटबल मा प्रगति गर्दै छन्। यस खण्डमा, हामी पारिवारिक जीवनमा बढी प्रकाश दिन्छौं, टम डेभिसका एक आमा-बुबासँग अभिवादन गर्दै- उसको आमा.
टम डेभिसको आमाको बारेमा अधिक:
डेन डेभिस लिभरपूलमा प्रसिद्ध कपाल र टम डेभिसको सुपर मम हुन्। डेइन एक प्रकारको आमा हुन् जसले आफ्नो छोरासँग यति धेरै संलग्न भइन्। डेभिसले डेली मेललाई भने कि उनको एकेडेमीमा फर्कंदा उनको आमाले उनलाई केश कपाल सैलुन बन्द गरिराख्दैनन् ताकि उनलाई फिन्च फार्ममा ड्राइभ गर्न सकिन्छ (एभर्टन एफसी प्रशिक्षण मैदान)। यो एक वरिष्ठ खेलाडी हुँदा पनि भयो तर उसले आफ्नो ड्राइभि driving टेस्ट पास गरेको छैन। एक अन्तर्वार्तामा, डेभिसले एक पटक आफ्नी आमाको बारेमा भनेका थिए;
"मेरो आमाले मलाई हरेक बिहान ल्याउनुहुन्छ र मलाई छोडनुहुन्छ"" डेभिसले भने, उनको अनुहार एक ठूलो मुस्कान संग। जब उनले सोधे कि यदि उनको टोफिसका साथीहरूले यसका लागि गिल्ला गरे भने, उनले जवाफ दिए: “हो, तर मैले यसमा केहि गलत देखिन!"
टम डेभिसका पिताको बारेमा बढि:
टोनी डेभिस टमको सुपर कूल बुबा हुनुहुन्छ। उहाँ एक प्रकारको बुबा हुनुहुन्छ जसले आफ्नो छोरा डेभिसलाई वरिपरि सँगै रमाईलो गर्नुहुन्छ जहाँ दुबै सँगै उसका खेलहरू हेर्छन्। यस अनुसार टेलीग्राफ, डेभिसले एक पटक भनेका थिए कि आफ्नो पहिलो वरिष्ठ क्यारियर गोल पछि, उनी आफ्नो परिवारको घर गएका थिए उनीहरूको सुपर बुबा (टोनी) का साथ। दुबै बुबा र छोराले राम्रो सम्बन्ध बनाएका छन्, जुन सदाका लागि रहन्छ।
टम डेभिसको भाई-लियामको बारेमा:
टम डेभिसका बाबुआमासँग उनका एक्लो बच्चा थिएनन्। उदाउँदो अंग्रेजी फुटबलरको एक जेठो भाई छ जो नामबाट जान्छ लियाम डेभिस। उहाँ जस्तै टम डेभिसको भाई पनि खेलकुदमा अग्रसर हुनुभयो। विकिपेडियाका अनुसार, लियाम अर्ध-पेशेवर फुटबलर हो जसले कर्जन एस्टनको लागि खेल्छन्। अर्को रिपोर्टमा लिआम पनि एक सभ्य शेफ हो जसले सबै प्रकारका खाना पकाउँदछन्।
टम डेभिस काकाको बारेमा:
टम डेभिसको अंकल, एलन ह्विटल - तपाईलाई उनीहरूको जस्तो लाग्छ के भेट्नुहोस्
एलन व्हिटल टम काका हुन्, जसलाई हामीले दावी गरेका थियौं डेभिसको क्यारियरलाई प्रज्वलित गर्नका लागि, जसले उसलाई एक खेलाडीका रूपमा सुधार गर्ने बनायो। आदर्श रूपमा, टोम डेभिस पूर्व एभर्टन खेलाडीका भतिजा हुन् जसले १ 74 1967 र १ 1972 XNUMX२ बीच क्लबको लागि appea XNUMX प्रदर्शन गरेका थिए।
टम डेभिस तथ्यहरू:
टम डेभिस बायोग्राफीको यस खण्डमा, हामी तपाईंलाई लिभरपूलको जन्म र वेस्ट डर्बी ब्रेड फुटबलरको बारेमा केहि अनकहीत जीवनी तथ्यहरू प्रस्तुत गर्नेछौं।
तथ्य # 1- सेकेन्डमा टम डेभिसको तलब ब्रेकडाउन:
२०१ 2019 को पहिलो क्वार्टरमा, अ mid्ग्रेजी मिडफिल्डरले एभर्टनसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, जसमा १,२ 1,293,684,, XNUMX को पूर्ण तलब रहेको (मिलियन पाउन्ड) प्रति वर्ष। टच डेभिसको तलबलाई प्रति सेकेन्ड, मिनेट, घण्टा, दिन, इत्यादिमा कमाई गर्दै ... हामीसँग निम्न छन्;
पाउण्डमा टम डेभिसको तलब कमाई (E)
यूरोमा टम डेभिसको तलब कमाई (€)
टम डेभिसको वेतन कमाई प्रति वर्ष £ 1,293,684 € 1,500,000
टम डेभिसको तलब प्रति महिना आय £ 107,807 € 125,000
टम डेभिसको वेतनमा प्रति हप्ता आय £ 26,294 € 30,488
टम डेभिसको तलब कमाई प्रति दिन £ 3,534 € 4,098
टम डेभिसको तलब प्रति घण्टा आय £ 147 € 171
टम डेभिसको तलब कमाई प्रति मिनेट £ 2.45 € 2.85
टम डेभिसको वेतन कमाई प्रति सेकेन्ड £ 0.04 € 0.05
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो टम डेभिस'बायो, यो उसले कमाएको हो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… बेलायतका औसत व्यक्तिले कम्तिमा 3.6..XNUMX बर्ष कमाउन काम गर्नु पर्छ £ 107,807, जुन टोम डेभिसले १ महिनामा कमाएको रकम हो।
तथ्य # २- टम डेभिस कपालको बारेमा:
टम डेभिसको कपालको कारण। क्रेडिट: SB-Nation, Zimbo र EvertonFC
कुनै श doubt्का बिना, उसको लामो सुनौलो कपालले उनलाई पिचमा तत्काल चिन्न योग्य बनाउँछ। तथ्य यो छ कि टम डेभिसका परिवारका सदस्यहरूले आफ्नो कपालको समर्थन गर्दछन्। एक पटक उनको युवा कोचले सबै गोला बारुदलाई घिस्याउन दिए। यो किनभने उसले सोचे कि कपाल डेनबाट उत्पन्न भयो, उसको आमा, र कपाल। डेभिड अनसवर्थ [एभर्टन अण्डर २ 23 कोच] डेभिसलाई उनको कपालको लागि स्टिकको भारी बोक्ने चीज दिन्थे, जहिले पनि उनलाई कट अफ गराउन भने। जब उनको कपालको बारेमा सोध्यो, तब टोमले एक पटक भने;
“मैले केश धेरै वर्ष अगाडि बढ्न थालिसकेको थिएँ, त्यसपछि यसबाट छुटकारा पाएँ। अचानक, मैले यो हराउन थालें, त्यसैले मैले यसलाई फेरि हुर्काएँ। ”
प्रिमियर लिगका फुटबलरले भने कि उनकी आमा, डियान एउटा केश कतै रहेछन् भन्ने विडंबनालाई स्वीकार गर्छन्।
तथ्य # - किन टम डेभिसले छोटो स्टकहरू लगाउँदछन्:
हामी तपाईंलाई बताउँछौं किन केन्द्रीय मिडफिल्डरले छोटो स्टक लगाउँछ? क्रेडिट: Zimbo
उसको कपालबाट उसको कपाल काटिएको चिन र त्यसपछि छोटो स्टोकिंगमा टम डीavies एक मुक्त उत्साहित फुटबलर को कल्पना कब्जा। तपाईंलाई थाँहा थियो?… टमको पुरानो स्कूल, कम-थकित मोजाले उसको काका, एलन ह्विटललाई पुरानो सन्दर्भ दिन्छ। हो, ऊ काका एलन ह्विटलको सम्मान गर्न गर्दछ जो एकपटक एभर्टनमा छोटो स्टकहरू लगाउँदछन्। आजको दिनसम्म धेरैले टमलाई मात्र ध्यान दिँदैनन्, तर अन्य फुटबलरहरू पनि मन पराउँछन् ज्याक ग्रेलाश atypical किनभने जुत्तालाई पिडित प्याडमा टाक गर्ने तिनीहरूको दृढ संकल्पको कारण।
तथ्य # Tom टम डेभिस फीफा रेटिंग्स:
२१ मा डेभिस (२०२० फेब्रुअरीको रूपमा) फिफामा सर्वश्रेष्ठ अ .्ग्रेजी मिडफील्डर्सहरू मध्ये एक हुने सम्भाव्यता छ। केन्द्रीय मिडफिल्डरसँग IF२ को फिफा सम्भावित रेटिंग छ, जसले उनलाई फिफा क्यारियर मोड प्रेमीहरूको लागि निश्चित खरीद बनाउँदछ।
केन्द्रीय मिडफिल्डरसँग राम्रो फिफा क्षमता छ, भविष्यको लागि वास्तवमा एउटा। क्रेडिट: SoFIFA
तथ्य # Tom टम डेभिस ट्याटूहरू:
टम लेख्दाको समयमा विश्वास गर्दैन ट्याटू संस्कृति जुन आजको खेल संसारमा धेरै लोकप्रिय छ। तल चित्रण गरिएको, मिडफिल्डरलाई आफ्नो धर्म, उसले मन पराउने चीजहरू वा परिवारका सदस्यहरू चित्रित गर्न उसको माथिल्लो र तल्लो शरीरमा मसीको आवाश्यक पर्दैन।
हाम्रो आफ्नै थॉमस ट्याटूमा विश्वास गर्दैनन् (लेखेको समयमा)। क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
तथ्य # 7- टम डेभिस धर्म:
टम डेभिसको वास्तविक नाम "थमस"बाइबलीय उत्पत्ति को एक नाम हो। यो नाम राख्नु भनेको टम डेभिसका आमा बुबा इसाई हुन सक्छ। लेख्दा, त्यहाँ कुनै संकेत छैन कि टम धर्म मा ठूलो छ। जे होस्, हामी तपाईलाई अपडेट गर्नेछौं त्यहाँ फोटो प्रुफको अस्तित्व छ जुन उनको ईसाई धार्मिक अभ्यास देखाउँदछ।
टम डेभिस जीवनी तथ्य (जिज्ञासा)
पुरा नाम: थोमा डेभिस (वास्तविक नाम)
जन्म मिति: जून १ 30 1998। को th० औं
जन्मस्थान: लिभरपूल, इ England्ल्यान्ड
उमेर: २१ (फेब्रुअरी २०२० सम्म)
स्थान उहाँ हुर्कनुभयो: वेस्ट डर्बी (लिभरपूलको पूर्व, इ England्ग्ल्यान्ड)
अभिभावकको नाम: डेन डेभिस (आमा) र टोनी डेभिस (बुबा)
Siblings: लियाम डेभिस (एल्डर भाई)
मनपर्ने संगीत ब्यान्ड: लियोनको किंग्स
मनपर्ने खाना: Parmesan चीज संग Pesto पास्ता।
सब भन्दा राम्रो मित्र: डोमिनिक क्यालोभ-लेभिन
उचाइ:5फी 11 भित्र (1.80 एम)
खेल्ने स्थिति: केन्द्रीय मिडफिल्डर
प्रारम्भिक फुटबल शिक्षा: स्कूल फुटबल र Tranmere रोवर्स
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो टम डेभिस चाइल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।